Archive du 20170522
Tiako I Madagasikara Vonona hiara-kiasa amin�ny rehetra
Taorian�ny nahatongavan�ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana avy any Eoropa sy nandraisany ireo solotenan�ny SADC teny Ambohitsorohitra, dia nitsidika an�i Mahjanga izy sy ny vadiny niatrika ny fivorian�ny synodan�ny Fiangonana FJKM any amin�ny faritra Boeny ny faran�ny herinandro teo.
Antoko Maitso Hasin�i Madagasikara Mbola misy ny fanantenana, hoy Alexandre Georget
Raha mbola misy ny Maitso, mbola misy ny fanantenana, hoy Atoa Georget Alexandre filohan�ny antoko politika Maitso Hasin�i
Fanesorana ny praiminisitra Lasa gidragidra ao an-dapa
Efa mampizarazara ny samy olon�ny HVM ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasa Olivier amin�izao fotoana izao.
Taratasin�I Jean Ady saritaka!
Manao ahoana ry Jean a! Inona indray moa izany ady saritakareo ao izany e! Inona no tsy nifankahazoana fa dia tena efa manako aty aminay anie na dia ezahinareo hampanginina aza e!
Trano may teny Imerinafovoany Tsy mazavazava
Ny sabotsy teo tokony ho tamin�ny 10 ora atoandro, dia nidonaka mainty be ny trano iray an�olon-tsotra tery Imerinafovoany, kaominina Talatamaty.
Fikojakojana endrika amam-bika Feno 10 taona ny Charm�elle beaut� Ampasampito
Hankalaza ny fahafolo taonany ny Charm�elle beaut� eny Ampasampito, tantanan-dRamatoa Vola Rafidimaharisoa.
Tsenan�i Mahitsy Misy mitady hanangana �pavillon� tsy ara-dal�na
Misy mitady hanangana � pavillon� tsy ara-dal�na ao amin�ny tsenan�i Mahitsy, kaominina ambanivohitra Mahitsy amin�izao fotoana izao.
Mpitandrina Tiana Alisoa Ranaivoniarivo �Franc ma�on� ny ankamaroan�ny mpitondra eto
Ny mpitandrina Tiana Alisoa Ranaivoniarivo no vahinin�ny fandaharana �Vahaolana� tao amin�ny onjampeo Top Radio (F.m 102.8) omaly tamin�ny 1 ora tolakandro.
Hetahetan�iza no natao horaisina sy hohenoina eto amin�ity firenena ity ? Ny an�ireo vahoaka ventesina efa ho isan�andro fa tompon�ny fahefana tokoa ve sa ny an�ireo mpitondra ?
Hopitaly manara-penitra 5 taona tsy mazava
Ny 1 desambra 2012 no notokanana ny hopitaly manara-penitra tao Antsiranana, afaka 6 volana mahery dia ho feno 5 taona.
Mpiasa Malagasy Tsy ho tohatra politika intsony
Feno 40 taona katroka ny 20 mey ny FISEMARE (Firaisamben�ny Sendikan�ny Mpiasa Malagasy Revolisiona).
Maroantsetra Maty teo am-panaovana �Gym bac� ilay tovolahy
Nosembanin-drahona ny adina fanadinana bakalorea ara-panatanjahantena tao Maroantsetra ny zoma teo. Maty tampoka teo am-pahatongavana nanao ny taranja farany 1.000m i Marco 19 taona mpianatry ny sekoly tsy miankina
Tantara an-tsehatra Tamaboho Nanasongadina ny kolontsaina Malagasy
Fahombiazana tanteraka no azo tamin�ilay tantara an-tsehatra tamaboho andiany voalohany notanterahina tetsy amin�ny lapan�ny tan�nan�Analakely ny herinandro teo.
Nambaran�ny depiote Ranaivoson Andrianavalona Fanomezanjaka voafidy tany Fenoarivobe fa anisan�ireo faritra mahamay amin�ny tsy fisian�ny fandriampahalemana ao aminy ny distrika tantaniny,
Mampatsiahy nytale jeneralin�ny Bianco fa ho avy amin�izay ny sary ho an�ireo mpiasam-panjakana tokony hanao fanambaram-pananana kanafe tsy nahavita izany aorian�ny 1 jona 2017.Ambaran�ny lal�na fa migadra enim-bolana ka hatramin�ny dimy taona miampy lamandy 10 ka hatramin�ny 40 tapitrisa ariary ny olona tsy nahavita fanambaram-pananana roa volana taorian�ny fanairana sy fampatsiahivana natao taminy.